४५ जिल्लामा भइरहेको चुनावमा, ३ सय ५० महिला चुनावी मैदानमा: १५२ जना तेस्रोलिंगी मतदाता « Light Nepal
४५ जिल्लामा भइरहेको चुनावमा, ३ सय ५० महिला चुनावी मैदानमा: १५२ जना तेस्रोलिंगी मतदाता
काठमाण्डौ, २१ मंसिर । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो चरण निर्वाचनअन्तर्गत ४५ जिल्लामा आज मतदान भइरहेको छ ।
राजधानीसहित देशका पहाडी तथा तराईका ४५ जिल्लामा मतदान भएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १२८ र प्रदेशसभातर्फ २५६ गरी जम्मा ३८४ निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदान भइरहेको छ । १५ हजार ३४४ मतदान केन्द्रमा बिहान ७ देखि मतदान सुरु भएको हो । साँझ ५ बजेसम्म मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
दोस्रो चरण निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ १३० महिलासहित एक हजार ६६३ र प्रदेशतर्फ २२० महिलासहित दुई हजार ८१९ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । पहिलो चरण निर्वाचनमा दुवैतर्फ गरी ७०२ जना मैदानमा थिए । बहालवाला प्रधानमन्त्रीका साथै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू प्रतिस्पर्धामा भएकाले यो निर्वाचन सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
कहाँ – कहाँ हुँदैछ मतदातान ?
बिहीबार इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापूर्व० तनहँ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापश्चिम०, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्युठान, बाँके, बर्दिया, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र डोटीमा मतदान भइरहेको छ ।
क – कसले गर्दैछन् मतदान ?
मतदानमा १५२ जना तेस्रोलिंगीसहित १ करोड २२ लाख ३५ हजार ९९३ जनाले मताधिकार प्रयोग गर्दै छन् । जसमा पुरुष मतदाता धेरै छन् । ६१ लाख ७१ हजार २ सय पुरुष मतदाता छन् भने महिला ६० लाख ६४ हजार ६४१ छन् । यस निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मोरङमा ६ लाख ४४ हजार ७८२ मतदाता छन् भने सबैभन्दा तेह्रथुममा ६६ हजार ६६७ मतदाता छन् । निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ ५२ र प्रदेशतर्फ ४८ दल सहभागी छन् । समानुपातिकतर्फ ५३ दलको प्रनिनिधित्व छ ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्न १ लाख ५५ हजार कर्मचारी परिचालन गरिएको छ भने सुरक्षाका लागि चारवटै सुरक्षा अंगका गरी २ लाख २७ हजार ९३२ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।